Nje Virus na GNU / Linux: Eziokwu ma ọ bụ Echiche Mygha? | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ndị ọzọ, Na-atụ aro
Mgbe ọ bụla arụmụka ahụ gafere Nje Virus y GNU / Linux ọ naghị ewe oge tupu onye ọrụ ahụ apụta (na-abụkarị Windows) gịnị ka ọ na-ekwu:
«Na Linux enweghị nje virus n'ihi na ndị okike nke mmemme ọjọọ a anaghị egbusi oge ịme ihe maka sistemụ arụmọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji »
Ihe m na-aza mgbe niile:
"Nsogbu a abụghị nke ahụ, mana ndị okike nke mmemme ọjọọ a agaghị egbusi oge n'ịmepụta ihe a ga-agbazi na mmelite mbụ nke sistemụ, ọbụlagodi na erughị awa 24"
Anaghị m emehie, dịka isiokwu a magburu onwe ya bipụtara na Nọmba 90 (Afọ 2008) site na Todo Linux Magazine. Onye na-eme ihe nkiri David Santo Orcero na-enye anyị n'ụzọ ọrụaka (mana ọ dị mfe nghọta) nkọwa mere GNU / Linux enweghi ụdị ngwanrọ ọjọọ a.
100% kwadoro. Ugbu a, ha ga-enwe ihe ga-eme ka ha kwusi onye ọ bụla na-ekwu okwu n’enweghị ezigbo ihe ndabere n’okwu a.
0.1 Download edemede (PDF): Echiche andgha na eziokwu: Linux na nje
1 Gịnị bụ nje?
2 Njefe nje na Linux:
3 Ulo owuwu nke Unix n’ozuzu ya na Linux anaghi eme ka mgbasa nje nje puru ime.
3.1 Ahụmahụ m dịka onye nchịkwa:
4 Na-emetụta ndị na-efe efe na Linux:
5 Echiche andgha na ụgha:
6 Antivirus maka Linux:
7 Klam - AV:
Budata edemede (PDF): Echiche andgha na Eziokwu: Linux na Viruses
Nke a bụ ederede ederede, ebe anyị na-atụle na ọ kachasị mma ịgụ n'ụzọ dị otu a:
Mkparịta ụka Linux na nje virus abụghị ihe ọhụrụ. Kwa mgbe anyị na-ahụ email na ndepụta na-ajụ ma ọ bụrụ na e nwere nje virus maka Linux; na-akpaghị aka onye na-aza n'ụzọ dị mma ma na-ekwu na ọ bụrụ na ha abụghị ndị a ma ama n'ihi na Linux agbasaghị ka Windows. Enwekwara mgbasa akụkọ ugboro ugboro site na ndị mmepe antivirus na-ekwu na ha hapụ nsụgharị nke nje virus Linux.
Onwe m, mụ na ndị dị iche iche enweela mkparịta ụka oge ụfọdụ site na mail, ma ọ bụ site na ndepụta nkesa, gbasara okwu gbasara ma nje dị na Linux. ọ bụ akụkọ ifo, mana ọ dị mgbagwoju anya ịkwatu akụkọ ifo ma ọ bụ, kama ọ bụ ụgha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ sitere na mmasị akụ na ụba. Mmadu nwere mmasi ibunye echiche ahuru na oburu na Linux enweghi udiri nsogbu ndia, obu na otutu mmadu ejighi ya.
N'oge m na-ebipụta akụkọ a, ọ ga-amasị m ide ederede doro anya na ịdị adị nke nje na Linux. N'ụzọ dị mwute, mgbe nkwenkwe ụgha na mmasị akụ na ụba juru ebe niile, ọ na-esi ike iwu ihe pụtara ìhè.
Agbanyeghị, anyị ga-anwa ịme arụmụka zuru oke zuru oke ebe a iji wepu ọgụ nke onye ọ bụla chọrọ ịkatọ ya.
Gịnị bụ nje?
Nke mbu, anyi ga amalite site na ichoputa ihe nje bu. Ọ bụ mmemme na-edepụta onwe ya ma na-arụ ọrụ na akpaghị aka, nke a na-achọkwa ịgbanwe ọrụ nkịtị nke kọmputa, na-enweghị ikike onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọmụma. Iji mee nke a, nje na-eji dochie faịlụ ndị nwere ike ịpịa ndị ọzọ metụtara koodu ha. Nkọwa ya bụ ọkọlọtọ, ọ bụkwa nchịkọta otu akara nke ntinye Wikipedia na nje virus.
Akụkụ kachasị mkpa nke nkọwa a, na nke dị iche na nje ndị ọzọ na malware ndị ọzọ, bụ na nje na-etinye onwe ya, na-enweghị ikike onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọmụma. ọ bụrụ na ọ wụnyeghị onwe ya, ọ bụghị nje virus: ọ nwere ike ịbụ rootkit, ma ọ bụ Trojan.
A rootkit bụ kernel patch nke na-enye gị ohere zoo usoro ụfọdụ site na ndị ọrụ mpaghara ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ mgbanwe nke koodu isi kernel nke nzube ya bụ na ngwa ndị na-enye anyị ohere ịhụ ihe na-agba n'oge ọ bụla egosighi usoro ụfọdụ, ma ọ bụ otu onye ọrụ.
A Trojan bụ analogous: ọ bụ mgbanwe na koodu isi nke otu ọrụ iji zoo ụfọdụ ọrụ aghụghọ. N'okwu abụọ ahụ, ọ dị mkpa ịnweta koodu isi nke ụdị a na-agbanye na igwe Linux, kpoo koodu ahụ, kwughachi ya, nweta ikike ndị nchịkwa, wụnye patched executable, ma bido ọrụ ahụ-n'ihe banyere Trojan ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ. zuru ezu - na nke
mgbọrọgwụ. Usoro a, dị ka anyị si hụ, abụghị obere, na ọ nweghị onye nwere ike ịme ihe a niile "na ndudue". Ha abụọ chọrọ ka echichi ha na onye nwere ikike nchịkwa, jiri nlezianya, mee usoro dị iche iche na-eme mkpebi nke ụdị teknụzụ.
Nke na-abụghị ihe ọmụma dị mkpa dị mkpa: maka nje iji wụnye onwe ya, ihe niile anyị ga - eme bụ ịhazi usoro oria dị ka onye ọrụ nkịtị. N'aka nke ọzọ, maka ntinye nke rootkit ma ọ bụ Trojan ọ dị mkpa na mmadụ nwere obi ọjọọ n'onwe ya na-abanye na akaụntụ mgbọrọgwụ nke igwe, yana n'ụzọ na-abụghị akpaghị aka, na-arụ usoro usoro nke enwere ike ịchọpụta. nje na-agbasa ngwa ngwa na nke ọma; rootkit ma ọ bụ trojan chọrọ ka ha soro anyị kpọmkwem.
Njefe nje na Linux:
Usoro nnyefe nke nje, ya mere, bụ ihe na - akọwa ya dị ka nke a, ọ bụkwa ihe ndabere maka ịdị adị ha. sistemụ bụ ihe enwe mmetụta ọsọ ọsọ nke nje na mfe ọ bụ ịzụlite oru oma na akpaghị aka nnyefe usoro.
Ka e were ya na anyị nwere nje chọrọ ịgbasa onwe ya. Ka e were ya na ọ na-oru site a nkịtị ọrụ, ọcha, mgbe launching mmemme. Nje a nwere nanị usoro nnyefe abụọ:
Mee onwe ya site na imetu ihe ncheta nke usoro ndi ozo aka, jidesie ha ike.
Imeghe faịlị sistemụ ndị arụ ọrụ, na ịtinye koodu ha –payload– na ndị executable.
Nje virus niile anyị nwere ike ịtụle dị ka nke a nwere opekata mpe otu n'ime usoro nnyefe abụọ a. O Abụọ. Enweghị usoro ndị ọzọ.
Banyere usoro nke mbụ, ka anyị cheta usoro ebe nchekwa ebe nchekwa nke Linux na etu ndị nhazi intel si arụ ọrụ. Ndị a nwere mgbaaka anọ, ọnụ ọgụgụ site na 0 ruo 3; ọnụ ọgụgụ dị ala karị, ikike ka ukwuu nke koodu ahụ na-agba na mgbanaka ahụ nwere. Ihe yiri mgbaaka ndị a na steeti processor, yana, ya mere, yana ihe enwere ike ime yana sistemụ dị na mgbanaka dị iche. Linux na-eji mgbanaka 0 maka kernel, ma gbanye 3 maka usoro. Enweghị koodu usoro nke na-agba na mgbanaka 0, ọ nweghịkwa kernel koodu na-agba na mgbanaka 3. E nwere naanị otu ntinye ntinye na kernel site na mgbanaka 3: nkwụsị 80h, nke na-enye ohere ịwụli site na mpaghara ebe ọ dị koodu njirimara na mpaghara ebe kernel koodu bu.
Ulo owuwu nke Unix n’ozuzu ya na Linux anaghi eme ka mgbasa nje nje puru ime.
Kernel site na iji ebe nchekwa dị iche iche na-eme ka usoro ọ bụla kwenye na ọ nwere ebe nchekwa niile n'onwe ya. Usoro - nke na-arụ ọrụ na mgbanaka 3 - nwere ike ịhụ naanị ebe nchekwa echekwara maka ya, maka mgbanaka ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụghị na ncheta nke usoro ndị ọzọ na-echebe; bụ na maka otu usoro ebe nchekwa nke ndị ọzọ nọ n'èzí adreesị oghere. Ọ bụrụ na usoro ga-eti adreesị ebe nchekwa niile, ọ gaghị enwe ike ịkọwa adreesị ebe nchekwa nke usoro ọzọ.
Gịnị kpatara na enweghị ike ịghọ aghụghọ a?
Iji gbanwee ihe ndị ahụ - dịka ọmụmaatụ, mepụta ihe ntinye na mgbanaka 0, gbanwee ihe mgbochi kwụsị, gbanwee ebe nchekwa mebere, gbanwee LGDT ... - ọ ga-ekwe omume site na mgbanaka 0.
Nke ahụ bụ, maka usoro iji nwee ike imetu ebe nchekwa nke usoro ndị ọzọ ma ọ bụ kernel, ọ kwesịrị kernel n'onwe ya. Na eziokwu ahụ bụ na e nwere otu ntinye na ntinye aka site na ndị na-edebanye aha na-eme ka ọnyà ahụ sie ike - n'eziokwu, ihe a ga-eme gafere site na ndekọ, nke a na-etinyezi dị ka ikpe na usoro nlebara anya. nkwụsị 80h.
Ọnọdụ ọzọ bụ ọnọdụ nke sistemụ arụmọrụ nwere ọtụtụ narị oku enweghị ederede ka ịpị 0, ebe nke a ga - ekwe omume - enwere ike ịnwe oku echefuru echefu echefu nke enwere ike ọnyà - mana n'ihe gbasara sistemụ arụmọrụ yana usoro dị mfe, ọ bụghị.
N'ihi nke a, na mebere ebe nchekwa ije gbochie a nnyefe usoro; enweghị usoro - ọbụnadị ndị nwere ikike mgbọrọgwụ - nwere ụzọ iji nweta ebe nchekwa ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịrụ ụka na usoro nwere ike ịhụ kernel; o nwere ya mapped si ya ezi uche ebe nchekwa adreesị 0xC0000000. Ma, n'ihi mgbanaka processor na-agba na ya, ị nweghị ike gbanwee ya; ga - eweta ọnyà, ebe ọ bụ na ha bụ ebe nchekwa dị na mgbanaka ọzọ.
"Ihe ngwọta" ga-abụ mmemme nke na-agbanwe koodu kernel mgbe ọ bụ faịlụ. Ma eziokwu ahụ bụ na e deghachiri ihe ndị a na-eme ka ọ ghara ikwe omume. Enweghi ike ikpocha ọnụọgụ abụọ, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ nde kernels dị iche iche n'ụwa. Naanị na mgbe ha na-edeghachi ya, ha etinyela ma ọ bụ wepụ ihe na kernel na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na ha agbanweela oke ụfọdụ aha mmado na-achọpụta ụdị mkpokọta - ihe a na-eme ọbụna n'amaghị ama - a gaghị etinye ihe mgbochi ọnụọgụ abụọ. Ihe ọzọ ga - abụ ibudata koodu isi na Internetntanetị, kpoo ya, hazie ya maka ngwaike kwesịrị ekwesị, chịkọta ya, wụnye ya, ma regharịa igwe. Ekwesịrị ime ihe a niile site na mmemme, na akpaghị aka. Nnukwu ihe ịma aka maka ọgụgụ isi ọgụgụ isi.
Dịka anyị nwere ike ịhụ, ọbụnadị nje virus dịka mgbọrọgwụ nwere ike isife ihe mgbochi a. Nanị ihe ngwọta fọdụrụ bụ nnyefe n'etiti faịlụ ndị a ga-ewepu. Nke anaghị arụ ọrụ dịka anyị ga-ahụ n'okpuru.
Ahụmahụ m dịka onye nchịkwa:
N'ime ihe karịrị afọ iri m na-ejikwa Linux, na nrụnye na ọtụtụ narị igwe na ebe data, ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, wdg.
Enwetụbeghị m nje
Ahụtụbeghị m onye nwere ya
Ahụtụbeghị m onye zutere onye nwere
Amaara m ọtụtụ ndị hụrụ Loch Ness Monster karịa ka ha hụworo nje virus Linux.
Onwe m, anakwere m na akpachapụghị anya m wee mepee ọtụtụ mmemme nke ndị akpọrọ "ndị ọkachamara" nke onwe ha kpọrọ "nje maka Linux" - site ugbu a gaa n'ihu, m ga-akpọ ha nje, ọ bụghị ịme ederede ederede - site na akaụntụ m na-emebu megide igwe m, iji hụ ma ọ bụrụ na nje nwere ike: ma bash virus na-ekesa gburugburu ebe ahụ - na nke, n'agbanyeghị, anaghị ebute nje ọ bụla - na nje nke ghọrọ ezigbo ama, wee pụta na pịa. Agbalịrị m ịwụnye ya; na mgbe ọrụ nkeji iri abụọ, akwụsịrị m mgbe m hụrụ na otu n'ime ihe ọ chọrọ bụ ịnweta ndekọ tmp na ụdị nke MSDOS. Onwe m, amaghị m onye ọ bụla nke mepụtara nkebi maka tmp ma dezie ya na abụba.
N'ezie, ụfọdụ ihe a na-akpọ nje nke m nwalere maka Linux chọrọ ọkwa dị elu nke ihe ọmụma na okwuntughe mgbọrọgwụ ka etinye. Anyị nwere ike iru eru, ma ọ dịkarịa ala, dị ka nje "crappy" ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ iji bute igwe ahụ. Ọzọkwa, na ụfọdụ, ha chọrọ ọtụtụ ihe ọmụma nke UNIX na-akpata paswọọdụ; nke dị nnọọ anya na ntinye akpaka na ọ kwesịrị ịbụ.
Na-emetụta ndị na-efe efe na Linux:
Na Linux, a usoro nwere ike nanị ime ihe ya irè ọrụ na irè otu ekwe. Ọ bụ eziokwu na enwere usoro iji gbanwee ezigbo onye ọrụ na ego, mana obere ihe ọzọ. Ọ bụrụ na anyị eleba anya na ebe ndị executables nọ, anyị ga-ahụ na naanị mgbọrọgwụ nwere ikike ikike ide ederede na ndekọ aha ndị a na faịlụ ndị dị na ya. Yabụ, naanị mgbọrọgwụ nwere ike gbanwee faịlụ ndị dị otú ahụ. Nke a bụ ihe mere na Unix kemgbe 70s, na Linux kemgbe mmalite ya, yana na faịlụ faịlụ nke na-akwado ihe ùgwù, ọ nweghị njehie ka pụtara nke na-enye omume ndị ọzọ ohere. A maara nke ọma na faịlụ ELF nwere ike ịdepụta ma dee ya nke ọma, yabụ ọ ga-ekwe omume maka ụdị nke ụdị a iji bulie ụgwọ ọrụ na faịlụ ELF ọzọ ... ọ bụrụhaala na onye ọrụ nke mbụ ma ọ bụ nke dị irè nke ndị mbụ nwere ohere ịnweta. ọgụgụ, ide na ogbugbu na faịlụ nke abụọ. Ego ole sistemu ga - eme ka ndị mmadụ nwee ike ibunye ya?
Ajuju a nwere azịza dị mfe, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ole faịlụ anyị nwere ike "ibunye", anyị na-ebupụta iwu ahụ:
Anyị na-ewepu ndekọ / proc n'ihi na ọ bụ sistemụ arụmọrụ mebere na-egosipụta ozi gbasara otu sistemụ arụmọrụ si arụ ọrụ. Typedị faịlụ faịlụ ndị nwere ikike igbu egbu anyị ga-ahụ anaghị eweta nsogbu, ebe ọ bụ na ha na-abụkarị njikọ njikọta nke na-egosi na agụrụ ya, ede ya ma gbue ya, ọ bụrụ na onye ọrụ anwaa ya, ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla. Anyị na-achịkwapụ njehie, hiri nne - ebe ọ bụ, ọkachasị na / proc na / ụlọ, enwere ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha ebe onye ọrụ nkịtị enweghị ike ịbanye -. Ederede a na-ewe ogologo oge. N'okwu anyị, na igwe ebe mmadụ anọ na-arụ ọrụ, azịza ya bụ:
Mmepụta na-egosi faịlụ atọ nwere ike ibute ọrịa ma ọ bụrụ na a na-agba ọsọ hypothetical virus. Abụọ ndị mbụ bụ faịlụ ụdị Unix soket na-ehichapụ na mmalite –ndị enweghị nje virus na-emetụta ya, na nke atọ bụ faịlụ mmemme mmepe, nke a na-ehichapụ oge ọ bụla a ga-edegharị ya. Nje a, n’echiche bara uru, agaghị agbasa.
Site na ihe anyị na-ahụ, naanị otu ụzọ isi gbasaa payload bụ site na mgbọrọgwụ. N'okwu a, maka nje na-arụ ọrụ, ndị ọrụ ga-enwerịrị ikike nchịkwa. N'okwu ahụ, ọ nwere ike ibunye faịlụ. Mana nke a na - abịa azụ ahụ: iji zipu ọrịa ahụ, ịkwesịrị iburu onye ọzọ ga - ewepụ ya, zigara ya onye ọrụ ọzọ na - eji igwe dị ka mgbọrọgwụ, ma megharịa usoro ahụ.
Na sistemụ arụmọrụ ebe ọ dị mkpa ịbụ onye nchịkwa maka ọrụ nkịtị ma ọ bụ iji mee ọtụtụ ngwa kwa ụbọchị, nke a nwere ike ịbụ ikpe. Mana na Unix ọ dị mkpa ịbụ onye nchịkwa iji hazie igwe ma gbanwee faịlụ nhazi, yabụ ọnụọgụ ndị ọrụ na akaụntụ mgbọrọgwụ na-eji dị ka akaụntụ kwa ụbọchị dị obere. Ọ bụ karịa; ụfọdụ nkesa Linux adịghịdị enwe akaụntụ mgbọrọgwụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, ọ bụrụ na ị nweta ebe eserese dị ka nke a, ndabere na-agbanwe na-acha uhie uhie, na ozi a na-eme ugboro ugboro iji chetara gị na ekwesighi iji akaụntụ a.
N'ikpeazụ, ihe ọ bụla a ga-eme dị ka mgbọrọgwụ nwere ike ime ya na iwu sudo n'enweghị ihe egwu.
N'ihi nke a, na Linux executable enweghị ike ibunye ndị ọzọ ọ bụrụhaala na anyị anaghị eji mgbọrọgwụ akaụntụ dị ka ndị nkịtị iji akaụntụ; Ma ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ antivirus na-ekwusi ike na-ekwu na e nwere nje virus maka Linux, n'ezie ihe kacha nso nwere ike ịmepụta na Linux bụ Trojan na mpaghara onye ọrụ. Naanị otu ụzọ ndị Trojans a nwere ike isi metụta ihe dị na sistemụ ahụ bụ site na ịgbanye ya dịka mgbọrọgwụ yana ikike ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị igwe dị ka ndị ọrụ nkịtị, ọ gaghị ekwe omume usoro nke onye ọrụ nkịtị na-ebute ka ọ ghara ịbịnye usoro ahụ.
Echiche andgha na ụgha:
Anyị na-achọta ọtụtụ akụkọ ifo, hoaxes, na ụgha doro anya banyere nje na Linux. Ka anyị depụta aha ha dabere na mkparịta ụka mere na oge gara aga na onye nnọchi anya nke onye nrụpụta nke antivirus maka Linux onye iwe were nke ukwuu site na otu isiokwu bipụtara n'otu magazin a.
Mkparịta ụka ahụ bụ ezigbo ihe atụ atụ, dịka o metụtara akụkụ niile nke nje na Linux. Anyị ga-enyocha akụkọ ifo ndị a niile n'otu n'otu ka a tụlere ha na mkparịta ụka a, mana nke emegharịrị ọtụtụ oge na ọgbakọ ndị ọzọ.
Echiche 1gha XNUMX:
"Ọ bụghị mmemme mmemme niile, ọkachasị nje virus, chọrọ ikike mgbọrọgwụ ibunye, ọkachasị n'ihe gbasara nje virus nwere ike ibute (ụdị ELF) nke na-ebute ndị ọzọ na-arụ ọrụ".
Onye obula n’eme nkwuputa di otua amataghi ka usoro ihe oma nke Unix si aru oru. Iji metụta otu faịlị, nje chọrọ ihe ùgwù nke ịgụ –a ga-agụ ya ka ọ gbanwee ya, na ide –nke ga-ede maka mgbanwe ahụ ka ọ dị ire – na faịlị nke ọ chọrọ ịrụ.
Nke a bụ mgbe niile, na-enweghị ihe ọzọ. Na na nkesa ọ bụla, ndị na-abụghị ndị ọrụ enweghị ikike ndị a. Mgbe ahụ n’abụghị mgbọrọgwụ, ọrịa ahụ agaghị ekwe omume. Nnwale ule: Na ngalaba gara aga anyị hụrụ edemede dị mfe iji lelee ụdị faịlụ nwere ike ibute ọrịa. Ọ bụrụ na anyị wepụta ya na igwe anyị, anyị ga-ahụ otu esi eleghara anya, yana gbasara faịlụ sistemu, ihe efu. Ọzọkwa, n'adịghị ka sistemụ ndị dị ka Windows, ịkwesighi ị nweta ikike nchịkwa iji rụọ ọrụ nkịtị na mmemme ndị ndị ọrụ na-ejikarị.
Echiche 2gha XNUMX:
"Ha ekwesighi ka ha wee gbanye mgbanaka iji banye sistemụ a, n'ihe banyere Slapper, idide nke na-erigbu nsogbu na Apache's SSL (asambodo ndị na-enye ohere nkwukọrịta echekwara), mepụtara netwọkụ nke zombie igwe na Septemba 2002".
Ihe atụ a anaghị ezo aka na nje, mana irighiri. Ihe dị iche dị ezigbo mkpa: ikpuru bụ mmemme nke na-erigbu ọrụ maka ịntanetị iji zipu onwe ya. Ọ naghị emetụta mmemme mpaghara. Ya mere, ọ na-emetụta naanị sava; abụghị igwe.
The ikpuru mgbe niile dị nnọọ ole na ole na nke eleghara omume. Ihe atọ dị mkpa bụ ndị amụrụ na 80s, oge ịntanetị na-emeghị ihe ọjọọ, na onye ọ bụla tụkwasịrị onye ọ bụla obi. Ka anyị cheta na ha bụ ndị metụtara ozi ozi, mkpịsị aka aka na rexec. Taa ihe dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịgọnahụ na ha ka dị, na ọ bụrụ na anaghị achịkwa ya, ha dị oke egwu. Ma ugbu a, oge mmeghachi omume na ikpuru dị mkpụmkpụ. Nke a bụ ihe banyere Slapper: ikpuru nke emere na ngwangwa achọpụtara - ma kpachie ya - ọnwa abụọ tupu ọdịdị nke ikpuru ahụ n'onwe ya.
Ọbụna na-eche na onye ọ bụla na-eji Linux nwere Apache arụnyere ma na-agba ọsọ oge niile, naanị imelite nchịkọta kwa ọnwa ga-abụ ihe zuru ezu ka ọ ghara itinye ihe egwu ọ bụla.
Ọ bụ eziokwu na ahụhụ SSL nke Slapper kpatara kpatara dị oke egwu - n'ezie nnukwu ahụhụ a hụrụ na akụkọ ntolite niile nke SSL2 na SSL3 - yana etu a ka edoziri ya na awa ole na ole. Na ọnwa abụọ ka achọtara nsogbu ahụ ma dozie ya, mmadụ mere ikpuru na njehie nke emezigoro, na nke a bụ ihe atụ kachasị ike enwere ike inye dị ka nsogbu, ọ dịkarịa ala ọ na-emesi obi ike.
Dị ka iwu zuru oke, ihe ngwọta nke ikpuru abụghị ịzụta antivirus, wụnye ya na oge mkpofu oge na-edebe ya ka ọ biri. Ihe ngwọta bụ iji usoro mmelite nche nke nkesa anyị: inwe nkesa ewelitere, ọ gaghị enwe nsogbu. Gba naanị ọrụ anyị chọrọ bụkwa ezigbo echiche maka ebumnuche abụọ: anyị na-akwalite iji akụnụba eme ihe, anyị na-ezere nsogbu nchekwa.
Echiche 3gha XNUMX:
"Echeghị m na isi ahụ bụ ihe a na-apụghị imeri emeri. N'ezie, enwere otu mmemme ọjọọ akpọrọ LRK (Linux Rootkits Kernel), nke gbadoro ụkwụ na eziokwu na ha na-erigbu nsogbu ndị dị na kernel modul ma dochie usoro ọnụọgụ abụọ.".
A rootkit bụ ihu ọma kernel patch nke na-enye gị ohere zoo ịdị adị nke ụfọdụ ndị ọrụ na usoro sitere na ngwaọrụ ndị a na-emebu, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha agaghị apụta na / proc directory. Ihe nkịtị bụ na ha na-eji ya na njedebe nke mbuso agha, na nke mbụ, ha ga-erigbu ọnọdụ dịpụrụ adịpụ iji nweta ohere na igwe anyị. Mgbe ahụ, ha ga-amalite usoro ọgụ, iji bulie ohere ha ruo mgbe ha nwere akaụntụ mgbọrọgwụ. Nsogbu mgbe ha na-eme bụ otu esi etinye ọrụ na igwe anyị na-enweghị achọpụta: nke ahụ bụ ebe rootkit batara. Ejiri onye ọrụ nke ga-abụ ezigbo onye ọrụ nke ọrụ anyị chọrọ ka ezoro ezo, ha wụnye rootkit ahụ, ha zoo onye ọrụ ahụ na usoro niile nke onye ọrụ ahụ.
Otu esi ezobe ịdị adị nke onye ọrụ bara uru na nje bụ ihe anyị nwere ike ịtụle ogologo, mana nje virus nke na-eji rootkit iji wụnye onwe ya yiri ihe ọchị. Ka anyị chee echiche nke usoro nke nje (na pseudocode):
1) Nje virus abanye na sistemụ.
2) Chọpụta kernel isi koodu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ na-etinye ya n'onwe ya.
3) Hazi kernel maka nhọrọ akụrụngwa metụtara igwe na ajụjụ.
4) Chịkọta kernel.
5) Wụnye kernel ọhụrụ; na-agbanwe LILO ma ọ bụ GRUB ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
6) Megharia igwe.
Nzọụkwụ (5) na (6) chọrọ ikike mgbọrọgwụ. Ọ gbagwojuru anya na ọ bụ ndị ọrịa butere ya (4) na (6). Mana ihe na-atọ ọchị bụ na o nwere onye kwenyere na enwere mmemme nwere ike ịme (2) na (3) na akpaghị aka.
Dị ka njedebe, ọ bụrụ na anyị ezute onye na-agwa anyị "mgbe enwere ọtụtụ ngwa Linux ga-enwe ọtụtụ nje", ma na-atụ aro ka anyị "nwee antivirus arụnyere ma na-emelite ya mgbe niile", ọ nwere ike ịbụ onye metụtara ụlọ ọrụ na-ere antivirus na mmelite. Nwee enyo, ikekwe otu onye nwe ya.
Antivirus maka Linux:
Ọ bụ eziokwu na enwere ezigbo antivirus maka Linux. Nsogbu bụ, ha anaghị eme ihe ndị antivirus na-arụ ụka. Ọrụ ya bụ ịlele akwụkwọ ozi na-esi na malware na nje gaa Windows, yana iji nyochaa ịdị adị nke nje Windows na folda ebubata site na SAMBA; ya mere ọ bụrụ n’anyị jiri igwe anyị dị ka ọnụ ụzọ ụzọ mail ma ọ bụ dịka NAS maka igwe Windows, anyị nwere ike ịchekwa ha.
Klam - AV:
Anyị agaghị agwụcha akụkọ anyị n’ekwughị maka isi antivirus maka GNU / Linux: ClamAV.
ClamAV bụ antivirus GPL dị ike nke na-achịkọta ọtụtụ Unix dị na ahịa. Ezubere ya iji nyochaa mgbakwunye iji zipu ozi na-agafe na ọdụ ma nyochaa ha maka nje.
Ngwa a na - ejikọ ozi zuru oke iji zipu nzacha nke nje nwere ike ịchekwa na sava Linux na - enye ụlọ ọrụ ozi; nwere nchekwa data nje nke a na-emelite kwa ụbọchị, yana nkwado dijitalụ. The nchekwa data a na-emelite ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, na ọ bụ a na; na-akpali nnọọ mmasị oru ngo.
Mmemme a dị ike nwere ike nyochaa nje ọbụlagodi na mgbakwunye na ụdị dị mgbagwoju anya iji mepee, dịka RAR (2.0), Zip, Gzip, Bzip2, Tar, MS OLE2, MS Cabinet files, MS CHM (HTML COprinted), na MS NZZ
ClamAV na-akwado mbox, Maildir, na RAW usoro faịlụ, yana Portable Executable files abịakọrọ na UPX, FSG, na Petite. Clam AV na spamassassin ụzọ bụ ụzọ zuru oke iji kpuchido ndị ahịa Windows anyị na sava ozi Unix.
Ajuju enwere enwere ike na sistemụ Linux? azịza ya bụ ee.
Ọ dịghị onye nwere ezi uche nwere obi abụọ na ya; Linux abụghị OpenBSD. Ihe ọzọ bụ windo ngwanrọ nke usoro Linux nwere nke emelitere nke ọma. Ọ bụrụ na anyị jụọ onwe anyị, enwere ngwaọrụ iji jupụta oghere ndị a, ma were ha? Ọfọn, ee, mana ndị a abụghị nje, ha na-erigbu.
Nje virus ga-emerịrị ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ etinyegoro na nsogbu Linux site na ndị na-agbachitere Windows, nke ahụ na-eme ka ịdị adị nke ezigbo nje - kernels ndị a na-edegharị ọzọ, ọtụtụ nsụgharị nke ọtụtụ ngwa, ọtụtụ nkesa, ihe ndị anaghị ebunye ha onye ọrụ ha n'ụzọ doro anya, wdg. Ekwesịrị itinye "virus" dị ugbu a na aka ya site na akaụntụ mgbọrọgwụ. Mana nke ahụ enweghị ike iwere nje.
Dị ka m na-agwa ụmụ akwụkwọ m mgbe niile: ekwela m, biko. Ibudata ma wụnye rootkit na igwe. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, gụọ koodu iyi nke "nje" dị na ahịa. Eziokwu dị na koodu isi. Ọ na-esiri onye bu nje “onwe ike” ibuso aha ya otu ahụ mgbe agụchara koodu ya. Ma ọ bụrụ na ịmaghị otu esi agụ koodu, otu ụzọ nchekwa dị mfe m na-akwado: jiri akaụntụ mgbọrọgwụ naanị ịnye igwe, ma debe mmelite nche ruo oge.
Naanị nke ahụ, ọ gaghị ekwe omume maka nje ịbata gị ma ọ gaghị adị mfe na ikpuru ma ọ bụ onye ga-awakpo igwe gị nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Nje Virus na GNU / Linux: Eziokwu ma ọ bụ Echiche Mygha?
Ihe 85 kwuru, hapụ nke gị
Sebas_vv 9127 dijo
Na mmelite kwa ụbọchị maka Distro Linux, OS gị na-echekwa nke ọma.
Nke a bụ UU
Mgbe m gụsịrị nke a, ịdị elu karịa nke enweghị ike na nchekwa izugbe ma e jiri ya tụnyere Windows doro anya, site na ihe m gụrụ ọ na-esiri m ike iji ihe ọghọm dị na GNU / Linux, nke bụ eziokwu bụ na OS a na-eju m anya oge ọ bụla. nke a na-edozi nsogbu nchedo, dịka n'oge ahụ achọpụtara nsogbu 40 na Ubuntu Linux kernel, na otu ụbọchị ahụ edozila ha ...
Ee ee, ihe ndị a ga-agụ site na ndị na-ekwupụta onwe ha Gurus na Kọmputa Sayensị na ahapụbeghị Windows. Mgbe anyị GNU / Linux ọrụ na-ekwu banyere uru nke OS, ọ bụghị ịwakpo Windows, ọ bụ n'ihi na anyị maara nke ọma ihe uru / ọghọm nke onye ọ bụla n'ime ha bụ 😀
OO, mma nkọwa isiokwu bụ "evangelization" Linux -> Imeri agaghị ekwe omume.
nanị magburu onwe nkọwa ...
ọ bụ ezie na abụ m onye ọrụ nkịtị, enwere m obi abụọ na ihe ọmụma m dị ka onye ọ bụla, mana m nọrọ na Linux, kemgbe 2006 ...
Ka anyi kparita ya na ndi enyi! Ha na enwe nsogbu mgbe niile oburu na ihe a bu ihe ozo, ma oburu na ozo ...
Enwere m ike ịkwado ịgụ PDF ... n'ezie, mara, amamiihe, zuru oke ...
Iwedata ya !!! 🙂
N'ezie ... Ana m edegharị ya ugbu a, iji mee ka ọ dịrị mmadụ niile mma ịgụ 😀
N'ime oge m na-emelite post ahụ ma hapụ njikọ ahụ na PDF ee, mana m ga-etinyekwa ọdịnaya ya ebe a.
Hey! Daalụ nke ukwuu maka transcript!
Edemede mara mma!
Amaghị m na ị gụrụ site na Linux Yoyo 🙂 dị ka m nakwa Muylinux na XD ndị ọzọ
Yoyo na-akọrọ ọtụtụ isiokwu anyị maka G + haha… anyị nwere ekele maka ya that
N'ezie… ọ na-agụ anyị oge ụfọdụ 🙂
Obi dị m ụtọ na ya, peeji a dị mma
Obi dị anyị ụtọ na ị na-eche ihe ọma banyere anyị blog ^^
Amaara m ọtụtụ ndị hụrụ Loch Ness Monster karịa ka ha hụworo nje virus Linux
Hahahahaha dị ịrịba ama.
Ahuru m akpa okwu a n'anya hehehe
O doro anya na 100% kwadoro, ọ ga-ekwe omume karịa, ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkekọrịta ọtụtụ!
Ezigbo ederede. Echere m na ọ bụrụ na ekpughere m na enweghị antivirus.
Maka ndị ọzọ, ọ pụtara na ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ onye na-ebu nje maka Windows, n'ezie ọ gaghị emetụta anyị, mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ibunye ya ndị ọrụ Windows ndị ọzọ, nri?
Ọzọkwa, gịnị ma ọ bụrụ na anyị emee ihe omume nke mmanya gbutere? kedu nke na-eme
Zaghachi Manuel Villacorta
Nabata Manuel Villacorta:
Nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-echekarị. N'ebe a na mba m ụfọdụ ụlọ ọrụ etinyelarị Kaspersky (Linux version) na Linux PCs (nke kwesiri ka a gbanye ya) ...
Banyere Wine, enweghị m ike ịgwa gị, mana m na-eche na ọ bụrụ na ọ na-emetụta ihe, ọ ga-abụ ngwa ahụ n'onwe ya n'ime Mmanya .. 😕
Edemede dị ezigbo mma, ọkachasị maka na ọ na-enye arụmụka dabere na data teknụzụ ọ bụghị naanị ikwu okwu
N'otu aka ahụ .. Kedu ihe ị chere? Echere m na nke ahụ dị mma? N’ebe ahụ ka inwere mgbe ị ga-eso mmadụ na Fb kpaa maka okwu 😀
Ọ dị ezigbo mma ịgbachi onye ọ bụla kwuru na nje virus juajua dị na GNU / Linux.
A ga m enwe ya na nrịbama maka mgbe m ga-eji pela na hasefroch.
Ọ bara uru ịgụ ya 😀
Ihe m chere bụ na akpachapụghị anya ọ na-afụ ụfụ, ịrafu enweghị ike ịbanye na anyị mana Trojan dị mfe.
Banyere pasent, ọ bụkwa n'ihi usoro ikike Linux
LOL na Loch Ness ogologo anụ xD
Ọfọn ... M mehiere ịchọrọ ime ka ndị ọrụ ibe m kwenye iji Linux maka otu ihe kpatara ndị ọrụ Windows tụgharịrị distros ahụ: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji ya, ọ ga-abụ na ihe ga-eme ya ... Amaara m, mmejọ m. Ma na nke a ka m ga - enwe ike ikwu ihe kpatara ya ji dị mma ... Ọ bụ ezie na m ga - eji ube na apụl kọwaa ya n’ihi na ọ bụghị ọtụtụ ndị ọrụ ibe m ga - aghọta nke ahụ yana ọ na - aga lol
daalụ nke ukwuu agbanyeghị maka ịchebe ozi a: 3
Ọmarịcha, ekele maka ama ahụ
N'ezie m ga-achọ ịchọta blog dịka nke a mana maka windo….
O siri ike n'ihi na Muy na-ata ahụhụ dị egwu
Enwere otu, http://www.trucoswindows.com/ Ha dị ezigbo njọ, ha abụghị fanboys.
N'oge ụfọdụ, agụrụ m onye ntinye aka otu o si atụ aro iji Ubuntu iji dozie nsogbu windo, mana ọ bụ ogologo oge gara aga.
Nje virus dị ka ihe niile, ha dị njọ mana ma ọ dịkarịa ala, ha na-enye ọtụtụ ndị mmadụ nri XD ma ọ bụghị na enwere m obi abụọ na ha ga-arụ ọrụ, o doro anya na na Linux ọ na-esiri ike ma ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị gaghị enweta otu, mana esemokwu ahụ ezughi jiri Linux, n'ihi na otu a ga-emetụta Mac osx.
Enwere ihe ndị ọzọ dị mkpa karịa nke ahụ maka iji Linux.
Kedu ihe bụ n'efu? xD
Edemede dị ezigbo mma, ekele maka ijikọ ya, ọ ga-abara anyị uru nke ukwuu.
Ọ ga-amasị m ịgbakwunye otu nchọpụta:
"Na Linux enweghị nje virus n'ihi na ndị okike nke mmemme ọjọọ a anaghị egbusi oge ịme ihe maka sistemụ arụmọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji"
N'ikwu eziokwu, nkwupụta a abụghị nke ọma: ọtụtụ sava na ịntanetị - nke ọtụtụ nde mmadụ jiri - na-arụ ọrụ na sistemụ GNU / Linux (Google, dịka ọmụmaatụ; na ha agaghị anọchite anya anụ oriri dị mma maka ndị nrụpụta? Virus) ; 91% nke 4 supercomputers kachasị ike n'ụwa, kwa [http://i.top500.org/stats].
Na nchịkọta, ọ bụrụ na enweghị ezigbo "nje" megide GNU / Linux, ọ bụghị n'ihi enweghị ọchịchọ, kama ọ bụ n'ihi nsogbu ọrụaka (akọwapụtara nke ọma na edemede ahụ).
Zaghachi Giorgio Grappa
na usoro ndi ozo nke UNIX? dijo
Gbaghara amaghị m, mana ole ebe sistemụ ndị ọzọ dabere na Unix, XNU ma ọ bụ BSD? Na njedebe GNU / Linux dabere na UNIX ma amaara m na sistemụ dị ka AIX bụ sava ka mma maka nchekwa ha, ana m ekwukwa banyere MacOs X na FreeBSD.
Echere m na isiokwu ahụ, n'agbanyeghị otú ọ dị mma, ekwesịghị ịdabere na Linux naanị, ọ bụ ezie na nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ raara onwe ya nye
Azịza na usoro ndị ọzọ nke UNIX?
ọ bụ ezigbo akwụkwọ akụkọ (niile Linux), ọ na-ewute ihe mere, na-ekele maka ịnapụta isiokwu ahụ! Cheers!
Ndien nso idatesịt? : S.
TU ... M gbara ọsọ n'iwu ahụ find na ha na-enye ebe ahụ ma na m na-eche na ọ bụghị n'elu ma, e nwere ihe karịrị 2000 "ekwe omume oria" (?)
Hehe, anaghị m ewepụ Ubuntu, n'eziokwu na distro ahụ amalitere m iji GNU / Linux n'onwe m, ọ masịrị m mbupute akpọrọ Oz Unity, rue mgbe m ghọtara na achọghị m ọtụtụ ngwa ndị gụnyere ndabara, na Kama nke ahụ, ha mụbara ngwangwa na OS m. Ya mere, na mgbe m gụsịrị akwụkwọ zuru ezu ma gbalịa ọtụtụ ihe dị iche iche, ekpebiri m ịkwaga Debian, nke m nwere ntụsara ahụ, na naanị ihe m chọrọ. Ma ọ bụrụ na achọrọ m ihe ọzọ, enweghị nsogbu, n'ezie m ga-ahụ ya na ụlọ ọrụ gọọmentị, ọ bụrụ na ọ bụghị, iji chịkọta isi mmalite. Ewoo! Na site na-ede akwụkwọ, magburu onwe isiokwu. Banyere.
Ọtụtụ n'ime ha gosikwara m, mana ha bụ folda, naanị ihe iwu ahụ na-eme, bụ ịchọ faịlụ ndị nwere ikikere ka ha bute ọrịa, ọ ga-adị mkpa iwepụ ụfọdụ ikikere, nri? a linuxero na-atụba m unyi, m na-eji ya egbu nje na windo
lee anya maka ozi ahụ ma ọ bụ ihe megidere ịgwa gị na ọ nweghị onye na-eji linux mgbe ndị anyị maara eziokwu banyere microsoft na-eji ya
Zaghachi ka edwar
Ndewo, nwunye! Kedu maka ya, ewepụtara m onwe m nye sistemụ dịka gị, edere m ya iji kelee gị, isiokwu gị bụ eziokwu dị ọcha, dịkwa oke mma !!! ma amamiihe !! na ntọala niile. ọ dị mma ịgụ ya! Daalụ nke ukwuu, Ekele, Eduardo Natali
Zaghachi Eduardo Natali
Microsoft na sistemụ arụmọrụ ya dịkarịa ala afọ 10 n'azụ * NIX sistemụ (ghọta Unix, Linux na MacOS), agbanyeghị na ekwesịrị ịmatakwu na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bụ mmejọ nke ndị ọrụ na Ikike Microsoft inye obere akwụkwọ dị mkpa maka nchekwa sistemụ arụmọrụ. * NIX sistemụ nwere njirimara sitere na site na ọdịdị ha na-eme ka mgbasa ozi na-enweghị atụ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume (ọ bụghị 100% enweghị ike ịgbagha). Ọ bụghị na enwere mmadụ ole na ole na-eji * NIX na Linux, kama ike nke sistemụ ndị a dị oke mma ma dịkwa mma, ihe nke akara windo enweghị dị ka ihe kacha mkpa (cheta Win Vista dịka ọmụmaatụ).
Zaghachi Jorge Manjarrez Lerma
Ebe m huru ubuntu 7.04 ya na klam, amam na ihe ekwesiri inwe nje maka gnu / Linux
Zaghachi Felipe Salazar Schlotterbeck
Eziokwu bụ na isiokwu ahụ dị ezigbo mma. Oru oru na oge iji zaa otutu ajuju ndi enwere na nke a ...
Nke bụ eziokwu bụ na ahụburu m ụfọdụ nje na sistemụ mana ọ bụ m kpatara ya, emelitere ihe niile na nwelite.
Trojans na Linux dị ka ha dị na Mac OSX na oke na Windows, yana ọdịiche dị na Linux ọ na-esikwu ike, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka imeghe bsd, ọbụlagodi nke siri ike karị.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka edemede a! Echere m na ọ bara ezigbo uru maka ndị ọhụrụ ahụ niile dịka m nwere mmasị ịmụtakwu ntakịrị banyere etu Linux si arụ ọrụ. 🙂
Agbanyeghi na ebiputela edemede a otutu ubochi, o tufughi oru ya, ya mere, site na ikikere gi, m na - edetuo - mado ego gi. 😉
Na-adọrọ mmasị, na-enweghị mgbagha m ga-ebudata PDF ederede ka m nwee ike ịgụ ya wee si na nkwubi okwu nke m.
Zaghachi Fernando MS
Ọ bụrụ na echeghị m, enwere m kọmpụta bọọdụ ahụ wee budata nje virus ndị kachasị njọ na ịntanetị na ihe ọ bụla, mana otu ụbọchị, ebudatara m kernel m ma nyochaa m mepụtara nje, ebe m chere na ọ nweghị ihe ga-eme, agbaghaara m ya, n'ihi na ihe niile shit n'ụlọ akwụkwọ ha gbalịrị idozi m, nkịta enweghị ike.
My virus uninstalled ọkwọ ụgbọala, nchịkọta m kpochapụrụ mmemme, mgbe m ofu ya ka m nwere ike oge ọ bụla m malitere nnọkọ ya laghachiri m mmalite nnọkọ menu.
postcript (e kwenyere na kọmputa m na Samsung ma ọ bụ toshiba, edegharịrị)
Zaghachi na Angamo1998
Edemede ahụ emeela ochie, mana ozi ahụ ka dịkwa, m kpochapụrụ ọtụtụ obi abụọ ... Daalụ
Ọ dị mma, m chere na Linux adịghị njọ dị ka ha na-ekwu, ebe ọ bụ na windo na Linux na-enwekarị nje, mana nke a apụtaghị na Linux enweghị ọrụ ka mma karịa windo ...
Daalụ maka nka gị ọ nyeere m aka nke ukwuu m bidoro na debian ma ahụrụ m ọtụtụ ihe na ihu ọma okwu a dị mkpa maka ndị na-amaghị OS a na amaghị nke ọma na m ga-akwado ịgụ ya maka ngụkọta
Mụ na Mint tinyere Rootkit Hunter. Eji m ya mee ihe ma ahụghị otu rootkit achọpụtara na ọnụ ya. N'ihi ya, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa ihe dị mkpa iji ya.
Ugbu a ka m na-eji OpenSUSE echegbughị m ịwụnye ya. Ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya: mgbe ịmalitere na Linux ụwa, ị maara mkpa ọ dị ịhapụ akaụntụ mgbọrọgwụ maka mkpa ndị kachasị mkpa ma mepụta ụdị onye ọrụ ọzọ. N'otu aka ahụ, ị ​​gaghị etinye mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na windo ọ bụla na-agbapụta n'amaghị usoro ọ ga-eme.
Echere m na akụkọ ifo nke nje na Linux bụ otu n'ime ọtụtụ ihe mgbochi uche iji merie ndị ọzọ, yana abụọ n'ime isi: "Aghọtaghị m Linux, amaghị m otu esi eji Linux" ma chọọ ịtụgharị ihe niile, na-atụ anya ka ọ rụọ ọrụ Linux sistemụ arụmọrụ otu ma ọ bụ yiri nke Microsoft.
Zaghachi Salomón Benítez
Edemede dị oke mma, echere m na ọ dị mma, daalụ maka ide ya. Agụla m ya iji kpuchie ya. Ekele m, n'isiokwu a ka akọwara ihe niile, nke m, biri settled
Enwere ike ịme virus maka usoro niile. Kedu ihe ọzọ, enwere m ike itinye koodu nke backdoor maka Linux site na otu akara koodu. Ajụjụ a abụghị ịdị adị nke nje, mana enwere ike ibute ọrịa.
Azịza (n'uche nke m)
Enwere ike ịme nje na Linux: Ee
Enwere nje virus na linux: Ole na ole, na enweghị ihe ịga nke ọma
Ohere dịịrị ibute ọrịa: pere mpe
Site n'ụzọ, maka ndekọ, akpọrọ m windo asị, anaghị m agbachitere ya. Ọ bụrụ n ’ọ pụta na onye na-ahụ maka ọrụ m ọ bụ n’ihi na m nọ n’ụlọ ntu ekwentị n’ihi na enweghị m ịntanetị n’ụlọ ugbu a.
M na-agụ ihe niile, m na-ahụ na ọ bụghị naanị obere oghere nche, mana n'ihi nhazi nke kernel n'onwe ya, mana gịnị kpatara gam akporo ji ata ahụhụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Windows site na nsogbu nje na ogologo oge ngwa ngwa?
Zaghachi Matías Demarchi
n'ihi na ndị ọrụ gam akporo anaghị ama otu esi ejikwa sistemụ ha ma wụnye ihe ọ bụla site na ebe ọ bụla na google enweghị mmasị na nchekwa na android n'ihi na ọ bụ azụmahịa na-atọ ụtọ na ọ nweghịkwa nchebe yana enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti OS GNU / Linux na android ọbụlagodi na ha nwere otu kernel
"N'ihi na ndị ọrụ gam akporo anaghị ama otu esi edozi sistemụ ha ma wụnye ihe ọ bụla n'ebe ọ bụla"
Nke ahụ bụ azịza ga-adị ire ma ọ bụrụ na anyị kwuru ya maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Ya mere ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla ọ bụrụ na e mebere usoro a, ihe kpatara ya bụ na (ab) ojiji nke onye ọrụ.
Mba mba, ikwesiri iguta ihe ozo ozo, lee anya nke oma ma ghara ịdaba na egwuregwu nzuzu nke nje virus zuru oke, rie odida kọmputa obula Ihe dị n'elu dịtụ mma ma n'ozuzu ya, ibunye ngwaọrụ nke na-eji kernel linux na spyware na malware bụ ihe kpatara onye ọrụ na-enye ikikere maka ihe ọ bụla ọ wụnye, ma ọ bụ na android ma ọ bụ na windo. Google na-eme ihe o nwere ike ime nke a mere na anaghị enye ndị ọnụ na ịnweta ohere mgbọrọgwụ.
Eziokwu bụ na Google anaghị eche ma ọ bụ na-agaghị echegbu onwe ha na a oké njọ ụzọ banyere nche nke android na ọ na-ewute n'ihi na android ga-ekwe omume nke ịbụ oké usoro ma ọ dịghị eme ka ha ọzọ tangled si gam akporo mmepụta ihe ekele Nchịkwa nke Google na-etinye azụ azụ ka ụlọ ọrụ dịka NSA nwee ike ịnweta data nkeonwe gị nke ahụ ọ na-echegbu onwe gị banyere nchekwa nke usoro? Ọzọkwa Gabo bụ eziokwu ọtụtụ ndị ọrụ mana ọ bụghị ihe niile na-akpata usoro ha n'amaghị ọtụtụ oge na nke a bụ mma agha ihu abụọ, nke naanị ndị maara ihe ha na-eme ga-eji.
N'ihi na ọtụtụ gam akporo na-eji ha dị ka mgbọrọgwụ. Ma nje virus ka dị ụkọ. Ọ bụ eziokwu na Galaxy anaghị ekwe ka ị gbanye mgbọrọgwụ, yabụ enweghị m oria, ọbụghị mbadamba m.
Maka na ihe niile esere n'isiokwu a bụ nzuzu.
Ha na-erere gị echiche na "enweghị" nke nje abụghị n'ihi oke ahịa dị ala kama ọ bụ n'eziokwu na kernel Linux dị ike na-egbochi mgbasa ya, mana sistemụ arụmọrụ na-egosi na kernel na oke ojiji yana enwere nje, nwayọ, kpọgidere na ụdị nsogbu niile.
Enweghị atụmatụ na-egbochi ịdị adị na mgbasa nke nje, n'ihi na ha na-eru Windows n'otu ụzọ ahụ ha nwere ike iru usoro ọ bụla: Onye ọrụ na-achọ ya, tinye ya na kọmputa ya ma na-eme ya na-eleghara ụdị ịdọ aka ná ntị ọ bụla anya. Mgbe ọnọdụ ndị ahụ anaghị eme, ọrịa na-adịkarị efu na Windows.
Ihe ndọghachi azụ na-eme mgbe ị wụnye / iwepụ unyi. E nweghị usoro na imewe dịghịzi ka unyi. Ihe sistemụ arụmọrụ kachasị ewu ewu bụ, ka a ga-enwekwu mmepe, ihe ọ bụla ogo na nraranye ha.
Na iji chọpụta nkwụsịtụ na ogologo oge, ọ dị mkpa ịnwe sistemụ arụnyere ogologo oge!, Ọnọdụ nke anaghị adịkarị na Linux n'ihi usoro ụbọchị a na-eme ya, ma gbanwee distro, iji "melite" distro ahụ ma ọ bụ iji weghachite ya na ezumike ọ bụla ọ nwere na ụbọchị ọ bụla.
Akwa ozi, o doo anya ọtụtụ ihe banyere nje na Linux
Zaghachi Emilio Moreno
Nke kacha mma, ana m akwado ya!
Ọfọn, enweghị usoro dị 100% echedoro ma nke ahụ gụnyere GNU / Linux
Nwoke dị gịrịgịrị dijo
Ma antivirus abụghị naanị na - echebe gị pụọ na nje, enwere malware ebe niile, AV dị mma nwere ike ichebe gị na ya. Onye ọ bụla nke anaghị eji antivirus n'ihi na o nwere GNU / Linux (M na-ejikwa ya), mana ọ na-egosipụta ọtụtụ egwu.
Ikwesiri iche na antivirus na sistemụ unix anaghị aba ezigbo uru, ọ bụrụ na ikekwe ihe ha ga-ata ahụhụ kachasị ga-abụ site na xploits yana mmelite arụ ọrụ ọ ga-ezu, n'ezie ma ọ bụrụ na anyị echebara na ụfọdụ distros (n'ihe gbasara GNU / Linux) ha na-ewelite kernel ha ugboro abụọ n’afọ.
enwere ihe nke nje na-eleghara anya maka ụgwọ ma ọ bụ ngwugwu rpm, ndị mmadụ anaghị enyocha nchịkọta ndị a ma ha chọrọ ịnweta mgbọrọgwụ iji wụnye.
Ọ bụ eziokwu, mana ọtụtụ n’ime anyị ga-eji ebe nchekwa ha kwekọrọ. Enwere ndị raara onwe ha nye nke a ogologo oge ma nwee akụkọ ihe mere eme na-arụ ọrụ na Linux, mgbe ụfọdụ nzere ndị ahụ na-enyere aka ịmata ma ịtụkwasị obi ma ọ bụ.
Zaghachi Tomás Sandoval
ọmarịcha post, amaghị m ihe ndị a gbasara linx, daalụ maka ịkekọrịta.
Zaghachi oscar lopez
Edemede mara mma, ọ nyeere m aka nke ukwuu iji wepụ obi abụọ ụfọdụ n'isi m.
Zaghachi Manuel Fernando Marulanda
Daalụ, amachaghị m isiokwu ahụ ma isiokwu ahụ enyerela m aka nke ukwuu. Ekele!
Ezigbo weebụsaịtị, amaghị.
Enwere m mmasị na nkọwa gị banyere nje.
Ana m ejikọ gị na weebụsaịtị m,
Ndewo, m na-achịkwa ihe karịrị 3000 dị iche iche sava weebụ Linux, taa m nwere ike ịgwa gị na ọ bụrụ na m nwere nje na m neutralized ha na klam av, n'agbanyeghị nwere a firewall na ezi iwu, ọ agbasaghị. Otu ma ọ bụrụ na e nwere
Nsogbu a, ozi ịntanetị na ndebiri nke ibe nke mgbanwe na-enweghị ikike
Zaghachi Juan rojas
Nje virus ị nwere? N'ihi na nje na-abanye site na mail, ọkachasị site na onye na-ezigara onye na-eji Windows abụghị obere, mana site na ebe ahụ na-emetụta usoro ọ na-aga ogologo oge. Ya mere, m na-ajụ ọzọ ihe virus ọ bụ?
ozi, ezi, ozi magburu onwe ya
Na-akpali. Ikekwe n'ihi ọtụtụ ojiji nke mgbọrọgwụ na gam akporo, enwere nje virus maka gam akporo. Ma hey ha dị ụkọ.
Echere m na ransomware anaghị arụ ọrụ ya na Linux.
Ekele m na ekele maka post. Ezigbo mma !!!
"Ha agaghi egbusi oge na imeputa ihe a gha aghazi ya na oge mbu nke usoro a, obula na awa 24."
nke ahụ ga-abụ ma ọ bụrụ na achọpụtara ya ma mee ya n'ihu ọha.
E nweghị nje kọmputa na ndị ọrụ ha anaghị achọpụta ruo mgbe oge gafere.
E nwere ọbụna nje na-abịa site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na BIOS, ngwa ngwa, wdg ... ọbụlagodi nke ụlọ ọrụ gọọmentị mepụtara. Ọ baghị uru ikwu, enwere ọtụtụ nje virus na-arụ ọrụ maka Linux ma ọ bụ OSX, n'agbanyeghị na ọ bụghị dị ka Windows, n'ezie.
Ihe niile ị na-ekwu bụ ma ọ bụ obere eziokwu, ma ọ bụghị ọtụtụ. Rely na-adabere na akụkọ ifo iji gbasasịa akụkọ ifo ndị ọzọ….
Nwee ihe nkesa Debian na Kernel 4 maka ọnwa 6 jikọtara na ịntanetị na-eje ozi na-enweghị atụ html (ihe kachasị mfe) wee nwee ike ihichapụ karịa 80% nke post gị.
Ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume ka hacker banye os na ya nje na spyware.
Zaghachi iji gụọ
Echere m na afọ iri na abụọ gachara, anyị kwesịrị ka emegharịa edemede a. Kwurịtanụ banyere teknụzụ ọhụụ, egwu ọhụụ ... ma ọ bụrụ na anyị enweghị nje ma ọ bụ na-enweghị ya.
Ma ọ bụghị ya, akụkọ magburu onwe ya (nke m gụrụla eons ago).
Alejandro Alvarez ebe obibi dijo
Ọ bụrụ na m wụnye Windows na Linux, nje nwere ike tinye pc m mgbe m jiri Linux ma gbanwee Windows?
Zaghachi Alejandro Alvarez
Onu ogugu ohuru nke Xfce abughi ihe efu
Iwu SOPA, friza ... maka ugbu a